Dr. Abdinasir Yusuf Osman wuxuu ku takhasusay xoolaha nool waana baare caafimaadka guud. wuxuu ka heystaa PHD cilmiga xoolaha. Wuxuu la soo shaqeeyey machadyo iyo hayado waxbarasho oo caalami ah oo ay ka mid yihiin Royal Veterinary College, University of London, UK; the Institute of Endemic Disease, University of Khartoum, Sudan, iyo University Airlangga, Indonesia. Khibraddiisa shaqo waxay isugu jirtaa mareynta xoolaha nool. Xirfadahiisa baaritanka gaarka ah iyo hurumarinta siyaasadda oo noqotay mid faa'ido leh. Hadda waa hoggaamiyaha Ururka Caafimaadka Xoolaha Soomaliyeed.
Isse Ahmed Idow, wuxuu ku takhasusay beeraha, wuxuuna leeyahay khibrad in ka badan 30 sanadood. Wuxuu ka heystaa Master’s Degree jaamicada Utah State University, USA. Wuxuu leeyahay khibrado fara badan iyo takhasus; wuxuu la soo shaqeeyey hay'adaha dowladda, Ha’yadaha aan dowliga ahayn oo iskugu jira kuwa maxalli ah iyo kuwa caalami ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin WFP, UNDP, ICRC iyo CARE. Waa khabiir cilmi iyo awood tababar u leh inuu isu keeno habka waxbarashada, wuxuu leeyahay tababar waxtarleh oo gacanta laga sameeyo iyo hagitaan.
Dr. Bashir Abdisamad Hared waa khabiir 17 sano khibrad u leh maaliyadda. Wuxuu ka heystaa PHD maareynta iyo kontorolka nidaamka maaliyadeed. Sidoo kale wuxuu shahaadoyin ka heystaa IPFM, CIPA, CPA iyo IPSAS, takhasus iyo khibrado badan dhinaca maareynta iyo kontroolka nidaamyada, lataliye ganacsi, qiimeyn, stratijiyadaha lagu gorfeeyo mushkiladaha maaliyada iyo xisaabaadka, iyo dhismaha awoodaha shaqo ee heyadaha maaliyadda iyo xisaabadaaka. Taariikhdiisa qiimaha badan iyo khibradda uu leeyahay qiimeynta maaliyadda iyo baaritaan mushkiladaha maalitada iyo xisaabaadka, qiimeynta istratijiyada ganacsiga; iyo soo gadashada ganacsiga waxay istratijiyad u tahay qaabeynta jihada ganacsiga iyo go'aannada.
TAMARTA Dr. Abdullahi Hassan Mohammed Dr. Abdullahi Hassan Mohammed, wuxu ku takhasusay tamarta. Wuxuu MSc iyo PHD ka heystaa the Ufa State Technological University, Russia. Wuxuu ka soo shaqeeyey Wasaaradda Batroolka iyo Keydka Macdanta. Wuxuu noqday la taliye sare ee Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta, Agaasimaha Wakaalada Batroolka Iyo Macadanta ee Galmudug; iyo maareeye dibadda, qalabka lagu sawiro dhulka hoostiisa. Wuxuu aad uga qeybqaatay baaritaanno badan oo kala duwan oo la xariira batroolka iyo tamarta, shirar iyo qoraalo laga sameeyay dhinacyadaasi . Wuxuu ka tirsan yahay machadka Chemical Engineering (IChemE) iyo ururka Batroolka Soomaliyeed.
MARTISOORIDDA & MARTIGALINTA
Mr. Yasir Mohamed Baffo , waa maareeyaha dalxiiska iyo martisoorka, wuxuu heystaa takhasus badan ilaa toban sano ah maareynta dalxiiska iyo martisoorka. Wuxuu ka soo shaqeeyey la taliye sare qeybta dalxiiska ee Wasaarada Warfaafinta Dhaqanka Iyo Dalxiiska. Mudane Baffo waa aasaasaha iyo macallinka machadka dalxiiska iyo martisoorka oo khibrad tababar u leh xirfadaha maareynta shaqada martisoorka. Wuxuu ku faanaa inuu ka caawiyey Soomaliya sidii ay ugu biiri leheyd ururka dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay (UNWTO) iyo horumarinta siyaasadda dalxiiska Somaliyeed. Wuxuu ka qalinjabiyey Jaamicadda Utara Malaysia Kedah, Bachelor maareynta dalxiiska. Wuxuu hore ugu soo guuleystay abaalmarinta qiimaha leh 'JET age Continental Award' waa guuleyste da'yar oo muuqda iyo shakhsiga sanadka qeybta dalxiiska Afrika.
Mr. Abdul Qadir Omar Abdulahi waa machanical engineer khibrad badan u leh waxsoosaarka, qaabeynta teknoolajiyadda, howgalinta, hubinta tayada qalabka warshadaha iyo waxsoosaarka. Wuxuu ka heystaa MBA maareynta mashariicda iyo qorshenyta machadka Preston cilmiga maareynta iyo tiknolojiyada (PIMSAT) Islamabad, Pakistan, iyo Bachelor of Machanical Engineer (BE) jaamicadda N.E.D ee Engeneering iyo technologyada Karachi, Pakistan. Waxaa kale uu ka heystaa Diblooma ah 'Project Quality Assurance' machadka maareynta, Pakistan. wuxuu kale ka haystaa dibloomo kormeerida iyo qiimeynta isla jaamicaddaas. Wuxuu ku soo takhasusay waxsoosaarka, farsamada gacanta, iyo isku xirxirida qalabka. Wuxuuna ku faanaa taageeraddiisa farsamo ee dhameestiran iyo la taliye dhinaca cilmiga.